चुनावी माहोल तात्दा, नेप्से भने सेलायो, कसले कमाए ? कसले गुमाए ? « Clickmandu
चुनावी माहोल तात्दा, नेप्से भने सेलायो, कसले कमाए ? कसले गुमाए ?
प्रकाशित मिति :7May, 2017 3:48 pm
काठमाडौं । साताको कारोबारको पहिलो दिन नेप्सेमा भारी गिरावट आएको छ । नेप्से २४.२ अंकले झरेर १६२८.९८ अंकमा आयपुगेको छ । कारोबार रकम पनि ६९ करोड २४ लाख रुपैंयाँमा सिमित भएको छ ।
देशमा चुनावी माहौल बन्दै गर्दा नेप्सेमा केहिहप्ता उछाल आएको थियो । र, कारोबार रकम समेत केहीदिन त २ अर्ब नाघेको थियो । बिगत ६/७ हप्ता देखि नेप्सेको कारोबार रकम अर्ब माथि नै थियो ।
तर, चुनाव नजिकिंदै जाँदा भने नेप्सेमा सुस्तता छाएको छ । पछिल्ला केही दिनको राजनीतिमा केही उतारचढाव आए पनि चुनावलाई भने असर नपार्ने भइसकेको छ ।
मानिसहरुमा चुनाव लागिसकेको कारण सेयर बजारमा केहि सुस्तता आएको हुनसक्छ । चुनाव सकिएसँगै ठूलो मात्रामा सरकारी खर्च हुने र त्यसले ब्याजदर लाई घटाउँदा सेयर बजारमा सकारात्मक असर पार्नसक्छ । तर, हाललाई भने नेप्से केही सुस्ताउने नै देखिन्छ ।
आइतबार १४१ कम्पनीको ९ लाख ९९ हजार कित्ता सेयर कारोबार भएको छ । उपसूचकहरुमा उत्पादन ५.२६ र अन्य ०.२९ अंकले बढेका छन् भने अरु सबै घटेका छन् । बैकिङ २७.९५, होटेल २३.७८, बिकास बैंक २२.४४, जलबिद्युत ३१.९१, बित्त १०.८६ र बीमा ११२.३ अंकले घटेका छन् ।
आइतबार ५ सबैभन्दा बढी कारोबार हुने कम्पनीमा एसबिआइ बैंक, इन्भेष्टमेन्ट बैंक, प्रभु बैंक, एनसिसि बैंक र नेपाल लाइफ रहेका छन् । उनीहरुको क्रमशः ६ करोड २१ लाख, ३ करोड १४ लाख, २ करोड ५३ लाख, २ करोड ३४ लाख र २ करोड ३३ लाख रुपैंयाँको कारोबार भएको छ ।
आइतबार सबैभन्दा बढी १० प्रतिशतले साहारा बिकास बैंकको सेयर मुल्य बढेको छ । त्यसपछि दोस्रोमा ८ प्रतिशतले मेरो माइक्रोफाइनान्सको सेयर मुल्य बढेको छ । अन्य कम्पनीको सेयर मुल्य भने २ प्रतिशत भन्दा कमले नै बढेका छन् ।
आइतबार नयाँ नेपाल लघुबित्तको सेयर मुल्य झण्डै १० प्रतिशतले घटेको छ । यसैगरी किसान माइक्रोफाइनान्स र सिन्धु बिकास बैंकका लगानीकर्ताले पनि क्रमशः ८ र ६ प्रतिशतले गुमाएका छन् ।
नेप्से ७९ अंकले बढ्दा दर्जनबढी कम्पनीको सेयरमा पोजेटिभ सर्किट, कारोबार रकम पनि बढ्यो
काठमाडौं । मंगलबार सेयर बजारमा फेरि हरियाली छाएको छ । आइतबारदेखि उकालो लाग्ने थालेको नेप्सेको
प्रि-ओपनिङमा ६.६१ अंकले बढ्यो नेप्से, २४ कम्पनीको कारोबार
काठमाडौं । मंगलबारको प्रि-ओपनिङमा नेप्से परिसूचक ६.६१ अंकले बढेको छ । प्रि-ओपनिङमा २४ कम्पनीको कारोबार